VAIA15000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၁၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 15000
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရေစစ်ထုတ်သောလိုင်း ,	RO-VAIA-mm
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA15000
Using water purification lines to produce bottled purified water is an urgent matter. Clean water sources are in short supply, the consumer market is in desperate need of clean water for daily use, protecting the health of themselves and their loved ones.
အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေအတွက် ရေဘူးထုတ်လုပ်ဖို့ ရေသန့်လိုင်းကို သုံးရပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေက သူတို့တွေရဲ့ မိသားစုနဲ့ ချစ်ခင်ရသူတွေအတွက် ရေသန့်ကို လိုချင်ကြတယ်။
Collective image of Viet An company Viet An ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့လိုက်ပုံ
Therefore, Viet An provided 15000LPH VAIA15000 Purified Water Filtration System using autoval stainless steel filter column. Model VAIA15000 corresponds toafilter capacity of up to 15,000 liters of purified water per hour, this isalarge capacity, water quality ensures suitable for large-scale drinking water production facilities.
ဒါကြောင့် အော်တိုစတိန်းလက်စ်စတီးရေစစ်ကော်လံကို အသုံးပြုထားတဲ့ 15000LPH VAIA15000 ရေစစ်က တစ်နာရီမှာ ၁၅၀၀၀ လီတာ စစ်ထုတ်နိုင်တာကြောင့် ရေသန့်ဘူး အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။
If you are in need of 15000LPH VAIA15000 Purified Water Filtration System, please refer to the article below of Viet An General Trading Joint Stock Company for more information about the product.
15000LPH VAIA15000 ရေစစ်အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Features of 15000LPH VAIA15000 Purified Water Filtration System provided by Viet An Company
Viet An မှ 15000LPH VAIA15000 ရေစစ်၏ လက္ခဏာများ
• Currently, the market for bottled and bottled water is very active. That is why businesses are gradually changing from old and outdated water filtration lines to 15000LPH VAIA15000 Purified Water Filtration System with large capacity to meet that demand of consumers.
• ရေသန့်ဘူး ဈေးကွက်ဟာ ယခုအခါမှာ အလွန်နိုးကြွားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်း ယခင်က ဟောင်းပြီး ခေတ်နောက်ကျတဲ့ ရေစစ်လိုင်းတွေကနေ ဝယ်ယူသူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်တဲ့ 15000LPH VAIA15000 ရေစစ်ကို ပြောင်းသုံးလာကြပါတယ်။
• In terms of technology, it can be said that RO water purification systems are dominating the market today with innovations and breakthroughs. Owning 15000LPH VAIA15000 Purified Water Filtration System, you can completely rest assured to trade in bottled water, compete with large units. Because this isamachine produced by technology of the United States with the ability to purify to the end of the substances that exist in the water, making the water clearer, 100% clean and safe for health. The large capacity VAIA15000 Purified Water Filtration System ensuresalarge source of clean water, distributing quality products to the hands of the majority of customers. That is why Viet An always helps customers to construct and install purified water production systems, to ensure the best.
နည်းပညာပိုင်းမှာဆိုရင် RO ရေစစ်က ဈေးကွက်မှာ ထိုးဖောက်လာတဲ့ ခေတ်မီတဲ့ ပစ္စည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 15000LPH VAIA15000 ရေစစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင် ရေသန့်ဘူးတွေ အများကြီးကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်က US ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ရေကို ၁၀၀% သန့်ရှင်းပေးပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချရစေပါတယ်။ VAIA15000 က မြောက်မြားစွာသော ပမာဏကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် ရေသန့်ဘူးမြောက်မြားစွာကို ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ လက်ထဲ ထည့်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် Viet An မှ ဝယ်ယူသူတွေကို ရေသန့်စနစ်ကို အကောင်းဆုံးတပ်ဆင်ဖို့ ကူညီပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The filtration line works according to the following principles
ရေစစ်လိုင်းက အောက်က စည်းမျဉ်းတွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
First the water passes throughaheavy metal filter system
ပထမဆုံး ရေက ကြီးမားသောသတ္တုရေစစ်ကို ဖြတ်ပါတယ်။
Next to the activated carbon filter system to remove odors, color in water.
ထို့နောက် ရေထဲမှ အနံ့အသက် အရောင်ကို ဖယ်ဖို့ ကာဗွန်ရေစစ်ဆီ သွားပါတယ်။
Continue throughawater softener system, which contains ion exchange resins, to remove calcium deposits from the water.
အိုင်းယွန်းကို ပြောင်းပေးသော အစေးပါတဲ့ ရေကိုပျော့စေသော စနစ်ကို ဖြတ်ပြီး ရေထဲမှ ကယ်ဆီယမ် အကြွင်းအကျန်ကို ဖယ်ရှားပါတယ်။
Water is sent to the RO filtration system to filter the water. This is the most important step to help remove harmful substances in the water source
ရေကို စစ်ထုတ်ဖို့ RO ရေစစ်ကို ပို့ပါတယ်။ ဒါက ရေထဲမှ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အဆင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The water after filtered through the RO membrane is disinfected by ozone technology and UV light.
RO အလွှာပါးကို ဖြတ်ပြီး စစ်ထုတ်ပြီးသောရေကို အိုဇုမ်းနဲ့ UV အလင်းရောင် နည်းပညာနဲ့ ပိုးမွှားတွေကို သတ်ပေးပါမယ်။
Rinse the jar and fill inasterilized closed room.
ဘူးကိုဆေးပြီး ဖြည့်ကာ ပိုးသတ်သီးသန့်ခန်းထဲမှာ ထားပါတယ်။
Advantages of 15000LPH VAIA15000 Purified Water Filtration System
15000LPH VAIA15000 ရေစစ်၏ ကောင်းကျိုးများ
Talking about the advantages of the VAIA15000 bottled water filtration and production system, we must mention the following points:
15000LPH VAIA15000 ရေစစ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က အောက်က အချက်တွေကို ဖော်ပြဖို့ လိုပါတယ်။
It isamodern line using RO technology in the production of pure drinking water, bringing pure, safe water and protecting health.
ဒါက RO နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ ခေတ်မီလိုင်းဖြစ်ပြီး ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရေးမှာ သန့်ရှင်းပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်စေပါတယ်။
The filtration system operates on the principle of reverse osmosis, easy to use and operate. Pumping and shut-off can be automated and significantly saves running costs and hiring labor.
ရေစစ်က ပြောင်းပြန် အိုစမိုးစစ် စည်းမျဉ်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ပြီး လည်ပတ်ဖို့ အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ ရေစုပ်စနစ်က အော်တိုလုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်သမားစရိတ် သက်သာပါတယ်။
Quality water filtration line hasalong life, less maintenance and repair. Long-term use up to 20 years.
ရေစစ်လိုင်းက ကြာရှည်ခံပြီး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပြင်ရတာ နည်းပါးပါတယ်။ နှစ် ၂၀ အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Capacity is 15,000 L / h, producingalarge amount of purified water to consumers.
တစ်နာရီမှာ ၁၅၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ရေသန့်ပမာဏ အများကြီး ပေးနိုင်ပါတယ်။
Viet An water filtration line is capable of saving electricity 10-30% compared to other conventional water purification products.
Viet An မှ ရေစစ်လိုင်းက အခြားရေစစ်လိုင်းတွေထက် ၁၀-၃၀%လျှပ်စစ်ကို ချွေတာနိုင်ပါတယ်။
As an advanced technology line, you can be completely assured of the finished filtered water. We ensure that the water source meets the Ministry of Health standards. Make sure to be licensed to distribute the product to the marketplace.
ခေတ်မီတဲ့ နည်းပညာကြောင့် စစ်ထုတ်ပြီးသား ရေရဲ့ ကွာလတီကို စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ရေအရင်းအမြစ်က ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီမယ်လို့ အာမခံပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲကို ဖြန့်ဖို့ လိုင်စင်လုပ်ထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။
Note when using 15000LPH VAIA15000 Purified Water Filtration System
15000LPH VAIA15000 ရေစစ်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ သိထားရမည်များ
Although it isahigh-quality technology line, you still need to pay attention to some problems when using it. It is said that "all upto human’s use" so please note the following when operating machinery:
အဆင့်မြင့်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီစက်ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ အချို့ပြသနာတွေကို ဂရုပြုဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောက်က အချက်တွေကို မှတ်သားထားပေးပါ။
+ Periodically check the filter system, check whether the machinery components are working well.
+ရေစစ်ကို အချိန်နဲ့အမျှ စစ်ပေးခြင်း- စက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်လားသိရအောင် စစ်ဆေးပေးပါ။
+ Carry out periodic cleaning of the water filter material to ensure the filter is always well ventilated, good for the circulation of the water filtration system, to help filter cleaner and faster.
+ရေစစ်ကို ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်ဖို့ အချိန်မှန် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါ။
Above are detailed information about the 15000 L / h RO purified water filtration system using autoval stainless steel filter column. The number 1 quality water filtration and treatment system in Vietnam today. This product is also chosen by many overseas customers to use. If you are in need of buying 15000LPH VAIA15000 Purified Water Filtration System, please contact Viet An Company to advise us on products suitable for your business. With extensive experience in the construction of quality filtration system distribution, Viet An will surely make you satisfied at the highest level. Pleased to accompany and bring you the best products.
အပေါ်က အချက်တွေက စတိန်းလက်စ်စတီး အော်တိုကော်လံကို အသုံးပြုထားတဲ့ RO ရေစစ် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ နံပါတ် ၁ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းကို နိုင်ငံခြားမှ ဝယ်ယူသူတွေကလည်း ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က 15000LPH VAIA15000 ရေစစ်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Viet An ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး အကြံဥာဏ်ရယူလိုက်ပါ။ ရေစစ်တွေ ဖြန့်ဖြူးရေးမှာ အတွေ့အကြုံများစွာရှိတာမို့ Viet An မှ သင့်ကို လုံးဝစိတ်ကျေနပ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာပါ။ သင်နဲ့အတူ ပူးပေါင်းပြီး အကောင်းဆုံးပစ္စည်းကို ယူဆောင်လာပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။
1 Push pump with 304 Stainless steel head စတိန်းလက်စ်စတီးခေါင်းပါသော တွန်းအားရေစုပ်စက် 1 unit Ebara/ Pentax-Italy
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်မီးအိမ် 15 unit VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်မီးအိမ်ရုံ 15 unit VA/ USApec
4 304 stainless steel tank 304 စတိန်းလက်စ်စတီးတိုင်ကီ 1 unit VA/ USApec
7 Autovalve အော်တိုအဆို့ 1 unit VA/ USApec
8 304 stainless steel tank 304 စတိန်းလက်စ်စတီးတိုင်ကီ 1 unit VA/ USApec
9 Autovalve အော်တိုအဆို့ 1 unit VA/ USApec
11 304 stainless steel tank 304 စတိန်းလက်စ်စတီးတိုင်ကီ 1 unit VA/ USApec
12 Autovalve အော်တိုအဆို့ 1 unit VA/ USApec
14 40” PP Filter Cartridge ၄၀ 15 unit VA/ USApec
15 Industrial filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 unit VA/ USApec
16 304 stainless steel booster pump 304 စတိန်းလက်စ်စတီးအားပြင်းရေစုပ်စက် 1 unit Ebara/ Pentax-Italy
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ်4unit VA/ USApec
18 RO membrane ROအလွှာပါး 8 unit Hitech-USA/CSM Korea
25 UV lamp UV မီးအိမ်6unit Poland/ Hungary/ USA
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက်5unit VA/ USApec
27 7-core Industrial filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်2unit VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယားစစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 14 unit VA/ USApec
29 PPR pipe and accessories PPR ပိုက်နှင့် အဆင်တဆာများ 1 set Vietnam
30 Stainless steel frame စတိန်းလက်စ်စတီးဖရိန် 1 set Vietnam
Hỏi đáp & đánh giá 15000LPH VAIA15000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်